हिउँ खेल्न खप्तड जाने कि? :: Setopati
हिउँ खेल्न खप्तड जाने कि? होमस्टेले ल्यायो हेली प्याकेज
सेतोपाटी संवाददाता धनगढी, पुस २१
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै श्रीपेच मानिएको खप्तडमा पुस दोस्रो सातादेखि हिउँ पर्न थालेको छ। त्यसैले आन्तरिक पर्यटकलाई हिउँमय खप्तडमा डुलाउन डोटीका युवा पर्यटन अभिन्यता दिपकबहादुर खड्काले ‘हेली टुर प्याकेज’ ल्याएका छन्।
खप्तडको प्रवेशद्धार झिग्रानामा ‘खप्तड होमस्टे’ सञ्चालन गर्दै आएका खड्काले तीन किसिमका प्याकेज सार्बजनिक गरेका हुन्। अब धनगढीबाट ३० हजार, दिपायलबाट १० हजार र झिग्रानाबाट ८ हजार रुपैयाँको प्याकेज किनेर खप्तड घुम्न सकिनेछ।
‘प्याकेजमा दुईतर्फी हेली टिकट हुन्छ’, खड्काले सेतोपाटीसँग भने, ‘पर्यटकलाई खप्तडमा घुम्न र फोटो खिच्न केही समय दिइनेछ।’ खप्तड क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि आउने पत्रकारलाई झिग्रानाबाट उड्दा प्रति व्यक्ति एक हजार रुपैयाँ छुट दिइने समेत उनले जानकारी दिए।
कोभिड–१९ का कारण थलिएको पर्यटन उद्योगलाई पुर्नजीवन दिने उद्धेश्यले हेली प्याकेज बनाइएको खड्का बताउँछन्। ‘आन्तरिक पर्यटनमार्फत् पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सस्तोमा हेली प्याकेज बनाएको हुँ’, उनले भने।
खड्काले माउन्टेन एयरसँगको सहकार्यमा प्याकेज बनाएको बताए। एउटा हेलीमा पाँच जना यात्रुलाई बसाइनेछ।
बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाम जिल्लाको संगमस्थल मानिन्छ खप्तड। त्यहाँ ठुलाठूला पाटन र डाँडा छन्। त्यसैगरि अपिशैपाल हिमालको मनमोहक दृश्य देखिन्छ। खप्तड जैविक विविधताको अनुपम भण्डार हो।
पछिल्लो समय खप्तड आन्तरिक पर्यटकको रोजाईमा पर्दै गएको छ। विगतमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा पचास वर्षसम्म खप्तड बाबाले योग, ध्यान र तपस्या गरेका थिए।
खप्तड यात्रा गर्दा न्याना कपडा र जुत्ता लगाउनु पर्ने युवा पर्यटन अभियन्ता खड्काले बताए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २०, २०७७, २३:५७:००
एनआरएनको गरिमा र आइएलओको सहयोग
ओलीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने देउवाको संकेत, भने- प्रधानमन्त्री बन्न मलाई हतार छैन
मुस्कान खातुनले पाइन् अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अवार्ड
अमेरिकाले म्यानमारको सेनालाई निकाल्न दिएन आफ्नो बैंकमा रहेको १ अर्ब डलर
जानकी मन्थन, मैथिली साहित्य इतिहासदेखि एसिड पीडितको आक्रोश
तिलोत्तामामा १० वर्षभित्र ६० हजार दर्शक अट्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्पोर्ट्स पार्क
साइकलमा खाना डेलिभरी गर्ने पठाओका फुडम्यान (भिडि‌ओ)
सुस्ताएको काउलेपानी होमस्टेले गति लिँदै
सूर्य अस्ताएको दिन राजेश ढुंगाना
चारैतिर सन्नाटा छ शलन बस्नेत